Bit By Bit - imifuniselo Running - 4.1 Intshayelelo
Kwiindlela ezifihliweyo kude kule ndlela yokujonga ibhuku (isahluko 2) nokubuza imibuzo (isahluko 3) -abanqabileyo baqokelela idatha ngaphandle kwenjongo kunye nokutshintsha ngokufanelekileyo ihlabathi. Indlela efunyenwe kule sahluko-eqhuba ukuhlolwa-ihluke ngokukodwa. Xa abaphandi baqhuba iimvavanyo, bayangenelela ngokufanelekileyo kwihlabathi ukudala idatha efanelekileyo ukuphendula imibuzo malunga nobudlelwane bangela kunye nentsingiselo.
Imibuzo eyenziwa yimpembelelo kunye nefuthe ifumaneke ngokubanzi uphando loluntu, kwaye imizekelo ibandakanya imibuzo efana nale: Ngaba ukwandisa imivuzo yomfundisi kukunyusa ukufunda kwabafundi? Yintoni eyimpembelelo yomvuzo osisiseko kwizinga lokuqeshwa? Uhlanga lomenzi wesicelo lomsebenzi luchaphazela njani ithuba lokufumana umsebenzi? Ukongezelela kule mibuzo ngokucacileyo, ngamanye amaxesha imibuzo yokubangela kunye nefuthe ifumanekile kwimibandela epheleleyo malunga nokuphakanyiswa kweetriki zeetriki. Umzekelo, umbuzo othi "Yimpawu yintoni umbandela onokunikela ukuba ube kwiwebhusayithi ye-NGO?" Unemibuzo eninzi malunga nomphumo wemibala eyahlukileyo kwimibandela.
Enye indlela yokuphendula imibuzo eyenzayo-kunye-effect kukuba ukhangele iipatheni kwiedata ezikhoyo. Umzekelo, ukubuyela kumbuzo malunga nomphumo wemivuzo yomfundisi ekufundeni kwabafundi, unokubala ukuba abafundi bafunde ngakumbi kwizikolo ezinikezela umvuzo ophezulu ootitshala. Kodwa, ngaba lo mlinganiso ubonisa ukuba imivuzo ephezulu yenza abafundi bafunde okungakumbi? Akunjalongo noko. Izikolo apho ootitshala abafumana khona banokuthi bahluke ngeendlela ezininzi. Ngokomzekelo, abafundi ezikolweni abanomvuzo ophezulu ootitshala bangabakho kwiintsapho ezicebileyo. Ngaloo ndlela, oko kubonakala njengempembelelo yabafundisi kunokuvela nje ngokuthelekisa iintlobo ezahlukeneyo zabafundi. Ukwahluka okungafaniyo phakathi kwabafundi kuthiwa abadibanisi , kwaye, ngokubanzi, ukukhungatheka kwabangela ukuba abaphenyi bakwazi ukuphendula imibuzo eyenza imbangela kunye nefuthe ngokujonga iipatheni kwiedatha ezikhoyo.
Esinye isisombululo kwingxaki yokudibanisa kukuzama ukuthelekisa ngokufanelekileyo ngokulungelelanisa ukungafani okubonakalayo phakathi kwamaqela. Umzekelo, unokukwazi ukukhuphela idatha yerhafu yepropati kwiiwebhsayithi zikarhulumente. Emva koko, unokufanisa ukusebenza kwabafundi ezikolweni apho amaxabiso asekhaya afana noko kodwa imivuzo yomfundisi iyahluka, kwaye usenokufumana ukuba abafundi bafunda ngaphezulu kwizikolo ezineentlawulo eziphezulu. Kodwa kusekho ezininzi ezinokuthi zidideke. Mhlawumbi abazali baba bafundi bahluke kwizinga labo lemfundo. Okanye mhlawumbi izikolo ziyahluka ngokusondelana kwazo kwiilayibrari zoluntu. Okanye mhlawumbi izikolo ezihlawulwa ngutitshala ophezulu zinokuhlawulwa ngokukhawuleza kwiinqununu, kwaye inkokhelo enqununu, kungekhona ukuhlawulwa kootitshala, ngokwenene oko kwandisa ukufunda kwabafundi. Unokuzama ukulinganisa nokulungelelanisa le miba, kodwa uluhlu lwabadibanisi banokuthi lupheli. Kwiimeko ezininzi, awukwazi ukulinganisa kwaye ulungelelanise zonke izinto ezidibanisayo. Ekuphenduleni lo mngeni, abaphandi baye baqulunqa ubuninzi beendlela zokwenza uqikelelo lweengxelo ezingezizo-ndingazixubusha ezinye zazo kwisahluko 2-kodwa, ngezinye iindidi zemibuzo, ezi zixhobo zilinganiselwe, kwaye iimvavanyo zinikeza isithembiso ngenye indlela.
Iingcamango zenza abaphengululi bahambe ngaphaya kwemibandela kwi-data eyenzeka ngokwemvelo ukwenzela ukuphendula ngokuthembekileyo imibuzo ethile ebangela imbangela. Ngomlinganiso we-analog, iimvavanyo zazihlala zilukhuni kwaye zibiza. Ngoku, kwixesha ledijithali, izithintelo zokungena kwizinto zihamba ngokukhawuleza. Akulula kuphela ukwenza amalinge afana nalawo ayenziwe kwangaphambili, ngoku kunokwenzeka ukuqhuba iintlobo ezintsha zokuvavanya.
Kwizinto endizibhale kude kube kude ndide ndikhululekile ngolwimi lwam, kodwa kubalulekile ukuhlukanisa phakathi kwezinto ezimbini: iimvavanyo kunye nokuhlolwa okungalawulwa ngandlela-thile. Kulo vavanyo , umphandi uyangenelela kwihlabathi aze athathe umphumo. Ndive le ndlela echazwe ngokuthi "yi-perturb kwaye iyigcine." Ngomlinganiselo olawulwa ngokungapheliyo umphandi uphelela abanye abantu kungekhona kwabanye, kwaye umphandi unquma ukuba yiyiphi abantu abangenayo ukungenelela nge-randomization (umz. Uvavanyo olunokulawulwa ngoncedo olwenziwa ngokungaqhelekanga lwenza ukuthelekiswa okulungileyo phakathi kwamabini amabini: omnye owamkele ukungenelela kunye ongenalo. Ngamanye amazwi, ukuhlolwa okungalawulwa ngandlela-thile kuyisisombululo kwiingxaki zeengxabano. I-Perturb-kwaye ihlolisise iimvavanyo, nangona kunjalo, zibandakanya kuphela iqela elinye elifumene ukungenelela, ngoko ke iziphumo zingakhokelela abaphandi kwisiphetho esingalunganga (njengoko ndiza kubonisa kungekudala). Nangona kukho ukungafani okubalulekileyo phakathi kokulinga kunye nokuhlolwa okungalawulwa ngandlela-thile, abaphandi benzululwazi basebenzisa loo migaqo ngokungahambisani. Ndiya kulandela le ngqungquthela, kodwa, ngamaphuzu athile, ndiza kutyumla iindibano ukugxininisa ukubaluleka kovavanyo olulawulwa ngandlela-thile phezu kwezilingo ngaphandle kokungahambi kunye neqela lolawulo.
Ukuhlolwa okungalawulwa ngokungaqhelekanga kuboniswe ukuba yindlela enamandla yokufunda ngehlabathi lezenhlalakahle, kwaye kule sahluko, ndiza kukubonisa ngakumbi malunga nendlela yokusebenzisa ngayo uphando lwakho. Kwicandelo 4.2, ndiza kubonisa umxholo osisiseko wovavanyo kunye nomzekelo wokuzama kwi-Wikipedia. Emva koko, kwicandelo 4.3, ndiza kuchaza umahluko phakathi kovavanyo lwebhubhorari kunye nokuhlola kwimihlaba kunye nokwahlukana phakathi kovavanyo lwe-analog kunye neemvavanyo zedijithali. Ngokuqhubekayo, ndiza kuthetha ukuba ukuhlolwa kwimihlaba yedijithali kunokwenza izinto ezintle zixhobo zovavanyo lwe-analog (ulawulo oluqinileyo) kunye novavanyo lwe-analog field (ngokoqobo), konke kwinqanaba elingenakwenzeka ngaphambili. Ngokulandelayo, kwicandelo 4.4, ndiza kuchaza ezintathu iingqiqo-ukuqinisekiswa, i-heterogeneity imiphumo yonyango, kunye neendlela-ezibalulekileyo ekudaleni iimvavanyo ezicebileyo. Ngaloo mvelaphi, ndiza kuchaza i-trade-offs ezibandakanyekayo kwizicwangciso ezimbini ezibalulekileyo zokuqhuba iimvavanyo zedijithali: ukwenza ngokwakho okanye ukusebenzisana nabanamandla. Ekugqibeleni, ndiza kugqiba ngeengcebiso ezithile malunga nendlela onokusebenzisa ngayo amandla okwenene okuzama ukusebenzisa idijithali (icandelo 4.6.1) kwaye uchaze umthwalo othile ozayo kunye namandla (icandelo 4.6.2).